Maungtintyin: ခွင့်လွှတ်ပါ။ ပြီးယင် ပန်းများရဲ့ရနံ့ကို ရှုရှိုက်ပါ
ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အယူအဆကို Michael Christopher က The Black Angel - ဆိုတဲ့ သြဇာတိက္ကမ အပြည့်ရှိတဲ့ ပြဇာတ်မှာ အောင်မြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့က တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ခွင့်လွှတ်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ကို ဘာဖြစ်စေပါသလဲ? အကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်အတွက် ဘာဖြစ်စေပါသလဲ?
Christopher - ရဲ့ ပြဇာတ်ဟာ French ရွာငယ်တစ်ခုရဲ့အပြင်ဘက် သူနဲ့သူ့ဇနီးအတွက် ဘ၀သစ်ကို ပြန်စဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ရှေးအရင်ဂျာမန်စစ်တပ် General Engle နဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ Nuremberg စစ်ရာဇ၀တ်မှုခုံရုံးက သူ့ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီး အနှစ် ၃၀-ကြာ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လူအများက ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတိတ်ကာလကို မေ့ဖျောက်ပြီး ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်လို့ မျော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တောင်ရဲ့ အနီးအနားမှာ သစ်လုံးတဲအိမ်တစ်ခု တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အသစ်တဖန် စတင်ချင်ခဲ့ပါတယ်။
French journalist ဖြစ်တဲ့ Morrieu က အတိတ်ကို မမေ့နိုင်ပါ။ General ရဲ့စစ်တပ်က သူ့ရဲ့မိသားစုကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မရှိတော့ပါ။ နှစ် ၃၀-ကြာ Morrieu က သူ့ရဲ့လက်တုံ့ပြန် လက်စားချေရေးအတွက် စီမံထားပြီးပါပြီ။
သူက သူ့ကိုယ်သူ ပြောတာကတော့ “ တကယ်လို့ Nuremberg တရားရုံးက General Engel ကို သေဖို့ ပြစ်ဒဏ်မချမှတ်နိုင်ယင် ငါက သူ့ရဲ့သေဒဏ်ကြိုးမိန့်ကို ချမှတ်ပြီး အဲဒါကို ကွက်မျက်မယ်” လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရွာသားအစွန်းရောက်သမားများနဲ့ တော်လှန်ရေးဝါဒီများရဲ့ စိတ်အတွေးထဲမှာ အမုန်းတရား, အကြောက်တရားများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မီးစများကို ဆွပေးမီးထိုးပေးပါတယ်။
သူတို့ဟာ Engelနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီးကို သတ်ပြီး ညမှာ တဲအိမ်ကို ပြာပုံကျတဲ့အထိ မီးရှို့ဖို့ လျှို့ဝှက်ပူးပေါင်း ကြံစည်ထားကြပါတယ်။ Journalistတစ်ယောက်အဖြစ် Morrieu က General အတွက် မေးခွန်းများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါတွေက “ဘာ့ကြောင့် သူဟာ အဲဒါတွေကို လုပ်ခဲ့တာလဲ? ထောင်ထဲမှာ နှစ် ၃၀-ကြာပြီးတဲ့နောက် သူဟာ ယခု ဘာတွေ ထင်မြင်ခံစားခဲ့ရသလဲ? ဆိုတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူဟာ တဲအိမ်သို့ ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Generalနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးက သူ့ကို အံသြစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အဖြစ်ဆိုးများအတွက် အကြောင်းပြချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ လေ့လာဖို့ ကြိုးစားလျှက် သူ့ရဲ့အတိတ်အပြုအမူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရင်း တညနေလုံးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ စိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့နောင်တတွေ ပြည့်နေတဲ့ Generalကို တွေ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ ယုံကြည်နိုင်တဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းများကို ကူးယူလွှဲပြောင်းဖို့ အမှန်အားဖြင့် စောင့်နေတာပါ။
နေရာပြောင်းရွှေ့ပါ! ။ Morrieu က ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် Generalနဲ့သူရဲ့ဇနီးကို ခိုးထုတ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သူက ရွာသားများဟာ ညမှာ သူ့ရဲ့တဲအိမ်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကို သတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကို သူတို့ကို ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတယ်။
General က “ သင်က အကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်တယ် - ဆိုတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုအပေါ်မှာသာလျင်မူတည်ပြီး အကျွန်ုပ်တို့က သင်နှင့်အတူ လိုက်ပါနိုင်ပါလိမ့်မယ်” - လို့ ပြောပါတယ်။ Morrieu ဟာ Generalကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ Generalကို ကာကွယ်ကယ်ဆယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ အဲဒီည ရွာသားများဟာ တဲအိမ်ကို ပြာကျအောင်မီးရှို့ပါတယ်။ Engle ကို ပစ်သတ်ပြီး သူ့ဇနီးမှာလည်း အသက်ကင်းမဲ့နေပါပြီ။
ပြဇာတ်ကို တင်ဆက်ပြီးတဲ့အခါ အဖြေတစ်ခုအတွက် အသက်ရှုမှားစွာ ပင့်သက်ရှိုက်ယင်း ပရိသတ်ကို ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ်။
Journalist အတွက် ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့် ခွင့်လွှတ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲတာလဲ? နောက်ပြီး သူ့ကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ Engel အတွက် ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးတာလဲ? Journalist မပေးနိုင်တဲ့ Generalလိုချင်တဲ့အရာ အဲဒါက ဘာပါလဲ?
Bible(I John 1;9) မှာ ပြောထားတာကတော့ “အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကို ဖြောင့်ချက်ပေး ၀န်ခံခဲ့မယ်ဆိုယင် ထာဝရဘုရားသခင်က သစ္စာစောင့်သိ , တရားမျှတပြီး အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်လိမ့်မယ်” ဆိုတာပါပဲ။
ခွင့်လွှတ်ဖို့ဟာ မေ့ဖျောက်ဖို့တော့ မဟုတ်ပါ။ မေ့ဖျောက်ခြင်းဟာ မခဲယဉ်းပါ။ သင် လိုအပ်တဲ့အရာ အားလုံးက မသင့်လျော်တဲ့ မှတ်ညဏ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် မမှုလောက်စရာအနေဖြင့် ထိခိုက်ဖြစ်ပျက်ပုံကို သဘောထားမှတ်ယူဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်တော့ အသစ်စတင်ခြင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ဖို့ - သင့်ကို နာကျင်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူနဲ့ အစမှနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍ စတင်အစပျိုးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နာကျင်မှုကို ဖြေဖျောက် ပြေပျောက်သွားစေတာ မဟုတ်သလို အတိတ်ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကိုလည်း ချေဖျက်မေ့ပျောက်ပစ်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ အသစ်စတင်ခြင်းရဲ့ လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားတာကို ရပ်စဲခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ဖို့ သင်ဟာ အပြစ်ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေရန် ဖန်တီးရမည်မဟုတ်သလို လူတစ်ယောက်ရဲ့အတ္တကို ဖျစ်ညှစ်ရမည်လည်း မဟုတ်ပါ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် သင်ဟာ အနာဂတ်မှာ အတူတကွ လက်တွဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။
Bhagavad Gita (chapter 12)မှာ Krishna က ကြည်ညိုသူ, ကိုယ်ကွယ်ဆည်းကပ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာ ၃၅-မျိုးကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအထဲကတစ်ခုကတော့ ‘ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ သဘာဝတစ်ခု’ ပါဝင်ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ဖို့ သင်ယူပါ။ အခြားသူများကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းက အမှန်တကယ် ဘာဖြစ်စေသလဲ? ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အချက်အချာကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ါးမျိုစားသောက်နေတဲ့ အတွင်းရှိ မကြည်ဖြူခြင်း, ငြိုးမာန်ဖွဲ့ခြင်း, ဒေါသများကို အလိုအလျောက် ဖွတ်လျှော် ဆေးကြေားပြီး သန့်ရှင်းပေးပါတယ်။ အဲဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကို သန့်စင်ခ၀ါချပေးပါတယ်။
သင်ဟာ ၀င်းအိသော, ပကတိ အတိပြီးသော, ၀င်းလက် တောက်ပသော, ၂၄-ကရက်ရှိ ရွှေရည်စစ် ဖြစ်လာပါတယ်။
Mark Twain က ဒီအရည်အသွေးကို အမိအရ သိမ်းယူပါတယ်။ အဲဒါကတော့“ခွင့်လွှတ်မှုဟာ ခြေထောက်က နီလာပန်းကို ဖိညှစ်နင်ခြေနေတုန်း အဲဒီပန်းက လွှင့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရနံ့ဖြစ်တယ်” ဆိုတာကို ရေးသားလိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀-ကျော်အကြာက Spictetus က ပြောပါတယ်။ အဲဒါကတော့ - “ဒါဟာ စော်ကားမော်ကားလုပ်တဲ့ မတော်မတရားမှုကို ပေးတဲ့သူတော့ မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါကို ရယူတယ်ဆိုတဲ့အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ထိခိုက်နင့်နာမှုဟာ အခြားသူများက သင့်ကို ပြုလုပ်တဲ့အရာမှ ရောက်လာတာမဟုတ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အပြုအမူများနှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များနှင့်လိုက်၍ ပြုလုပ်ဖို သင်ရွေးချယ်တဲ့အရာမှ ရောက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်နင့်နာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့သဘောထားကို သင် ပြောင်းလဲအစားထိုးလျင်
ဖယ်ရှားရှင်းပစ်ခံရတဲ့ သင်ရဲ့ဓားစာခံသားကောင်းအဆင့်အတန်းကို သင် မကြာမီ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်” ဆိုတာပါပဲ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, November 22, 2010